Friday April 07, 2017 - 21:38:31 in Wararka Gudaha by Nocsom Editor
Munaasabaddan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Guddiga Olombikada Soomaaliya, waxaana goobjoog ku ahaa marti-sharaf ay ka mid ahaayeen: wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha, guddoomiyaha gobalka Banaadir, madaxda Guddiga Olombikada Soomaaliya, madaxda xiriirrada cayaaraha dalka, qaar ka mid ah guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir, kooxda muusikada ee ciidamada Booliska iyo Asluubta , fannaaniin iyo ka-qeybgalayaal kale oo badan.
In ka badan 2,000 oo ciyaaryahan, oo ka kala socday xiriirada cayaaraha dalka, degmooyinka, jaamacadaha, iyo Iskuulada ayaa waxa socod ku mareen garoonka, iyaga oo jaanta la qaadaya muusig ay tumayaan kooxda Baambayda.
Koox fannaaniin ah ayaa dadkii munaasabadda ka soo qeybgalay ku maaweliyay heeso macaan oo ku saabsan munaasabadda.
Ibrahim Xuseen Roombe, oo Guddiga Olombikada u qaabilsanaa qabanqaabada munaasabadda, ayaa hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in qabanqaabada munaasabaddan ay aad uga heersarreyso tii sanadki hore. Waxaana ii ujeedka munaasabadda ku sheegay isbarsahda iyo isdhexgalka dhallinyarada cayaaraha ku jira.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo isla shalay xilka laga qaaday, ayaa goobta ka hadlay, Isaga oo caddeeyayay in Intii uu isagu xilka gobalka hayaya uu maamulkiisu sare u qaaday cayaaraha gobolka, isla markaana la doonayo in sare looga sii qaado halka uu hadda joogo.
Ugu dambaynna, wasiirka cusub ee dhallinyrada iyo cayaaraha marwo- Khadiijo Maxamed Diiriye, oo qabashada xilka ka dib markii ugu horreysay ka qeybgalaysa dhaqdhaqaaqyada cayaaraha, ayaa waxa ay jeedisay hadal ay kaga warbixisay qorshayaasha wasaaraddeeda, Iyada oo ballanqaadday in ay muhiimadda saari doonto horumarinta cayaaraha.
Wasiiradda ayaa u mahadcelisay Guddiga Olombikada Soomaaliya iyo Xiriiradiisa oo ay sheegtay in aysan la’aanytood qabsoomi lahayn munaasabaddan.
Munsaabaddan, oo dhanka kale ay wehlisay xuska maalinta cayaartoyda Soomaaliyeed ayaa waxa uu sannadkan noqonayaa kii afaraad ee la xuso. Waxaana ay noqotay mid ka mida dhacdooyinka ugu ballaaraan ee ay GOS kula dabaaldegto bulshadeeda.